Iibso warqad cilmi baaris ah Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Waraaqda Cilmi-baarista Iibso ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Talooyin Markaad Iibsanayso Warqad Cilmi Baadhis ah
Sidaad horeba u ogayd, waxaa jira sababo aad ufiican oo ah inaad uga iibsato warqad cilmi baaris adeeg gaar ah. Waxaa la joogaa waqtigii in badan laga barto faa'iidooyinka adeegga qorista. Waraaqaha cilmi baarista waxaa loo qoraa iskuulada iyo machadyada kale ee tacliinta mowduucyo gaar ah. Sida cinwaanka ka muuqata, waxay ku saleysan yihiin noocyo kala duwan oo cilmi baaris ah oo ay sameeyeen aqoonyahanno kala duwan.
Waraaqahaani waxay leeyihiin ujeedo ah inay ardayda siiyaan aragti guud oo ku saabsan wixii ay ka barteen koorsadooda. Warqadahaani badanaa waxay ka kooban yihiin natiijooyinka la soo saaray inta lagu gudajiray baaritaanka la sameeyay. Waxa kale oo ku jira xog kala duwan oo la soo ururiyay intii lagu jiray hawsha cilmi baadhista. Waxaad ka heli doontaa waraaqo cilmi baaris ah oo loogu talagalay mowduuc gaar ah sida cilmu-nafsiga. Kuwa kale waxaa loogu talagalay dhagaystayaasha guud ee guud.
Maaddaama ujeeddada waraaqaha cilmi-baaristu ay badiyaa yihiin dabeecadda waxbarashada, waxaa caadi ahaan la siiyaa hay'adaha tacliinta. Waxaa jira machadyo tacliimeed oo gaar loo leeyahay oo u bixiya warqadan ujeedooyin kala duwan. Waxaa hadiyad ahaan loogu siin karaa ardayda ama macallimiinta qalin-jabineysa. Waraaqaha ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa tusaale ahaan ardayda doonaya inay qoraan waraaqohooda cilmi baarista. Waxay u isticmaali karaan aasaas ahaan sameynta warqad cilmi baaris ah.
Markaad ka iibsatid waraaqaha cilmi baarista adeeg gaar ah, waxaad fursad u leedahay inaad weydiiso su'aalo badan. Qorayaasha badankood wax su'aalo ah ma weydiiyaan. Si kastaba ha noqotee, way fiicantahay haddii aad su'aalo weydiiso. Qoraagu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu kaaga jawaabo weydiimahaaga si ka wanaagsan dadkaas aan su'aalaha weydiin doonin.
Waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad dooranayso adeeg bixiye. Qaar ka mid ah bixiyeyaasha adeegga ayaa ka qaata sicirro ka sarreeya kuwa kale, sidaa darteed had iyo jeer waa fikrad wanaagsan in la isbarbardhigo sicirka adeeg kasta inta aanad mid dooran.
Adeeg bixiye ku siiya qiimo go'an ayaa noqon doona xulashada ugu fiican. Tan macnaheedu waxa weeye inaadan haysan meel aad gorgortan ama gorgortan ku gasho maadaama ay diyaar u yihiin inay ku siiyaan wax kasta oo aad weydiisato.
Faa'iido darrada tan ayaa ah in laga yaabo inaad ku dhammaato lacag badan oo ku saabsan warqaddaada cilmi-baarista ee bixiyaha adeegga ee ku siinaya qiime jaban. Waa inaad ka fikirto nooca warqad ee aad rabto oo dhib kuguma noqon doontid inaad la imaatid qiimo wanaagsan. Adeegbixiyaha sidoo kale waa inuu awoodaa inuu ku siiyo nooc ka mid ah taageerada haddii ay dhacdo inaad u baahato xoogaa caawimaad ah oo ku saabsan qorista warqadda cilmi-baarista. Tani waxay hubin doontaa inaadan wax dhib ah ku qabin wax walba.
Sidoo kale waa inaad xusuusnaataa inaad hubiso nooca taageerada ay bixiso adeeg bixiyaha. Haddii aadan jeclayn waqtiga jawaabtooda, markaa waxba kuma lumineyso adoo raadinaya adeeg bixiye kale. Laakiin waa inaad hubisaa inaad ku qanacsan tahay jawaabaha adeeg bixiyaha iyo heerka taageerada ay bixiyaan.
Waxa kale ee aad u baahan tahay inaad ka raadsato adeeg bixiye waa sumcadooda. Shirkad la isku halleyn karo oo ay aqoonsan tahay macaamiisheeda ayaa ah xulasho wanaagsan maxaa yeelay shirkadahaani waxay awoodi karaan inay yeeshaan sumcad wanaagsan oo ay sii haysan karaan xitaa haddii aysan ganacsi ku jirin muddo dheer.
Waxaa muhiim ah in la ogaado inta shirkaddu ku jirtay ganacsiga iyo baaxadda guusha ay ku guuleysatay. Tani waa muhiim maxaa yeelay mudada dheer ee adeeg bixiyuhu ku jiray ganacsiga, waa sii dhisnaanaysaa.
Waxyaabaha kale ee aad u baahan tahay inaad ogaato ayaa ah inay shirkaddu ku siineyso nooc kasta oo dammaanad qaad ah waraaqahooda cilmi baarista. Tani waa muhiim maxaa yeelay waxaad ka shakisan tahay sida wanaagsan ee ay waraaqahooda cilmi baarista u yihiin waxaadna weydiisan kartaa dammaanad intaadan mid ka iibsan.
Waxaad sidoo kale weydiin kartaa markhaatiyo qorayaasha kale ee isticmaalay warqada cilmi baarista ee aad iibsatay. Tani waa hab fiican oo lagu ogaan karo haddii warqadda cilmi-baarista ee aad haysataa ay tahay mid tayo sare leh.